TPLF miseensotasaa muudama Federaalaa gara garaarra jiran akka gadhiisan ajajuu ibse – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooTPLF miseensotasaa muudama Federaalaa gara garaarra jiran akka gadhiisan ajajuu ibse
Siyaasa Itoophiyaa: TPLF miseensotasaa muudama Federaalaa gara garaarra jiran akka gadhiisan ajajuu ibse
Onkololeessa 5, 2020 (BBC Afaan Oromoo) — Addi Bilisa Baasaa Tigiraay (TPLF) miseensota isaa muudama siyaasaa mootummaa Federaalaatti sadarkaa gara garaa irra turan, itti-gaafatamummaa isaanii gadhiisanii akka bahan ajajuu miseensi Koree Hojii-raawwachiistuu TPLF Obbo Getaachoo Raddaa BBCtti himan.
Obbo Geetaachoon barri aangoo Paarlaamaa Itoophiyaa kaleessa akka xumurame eeruun, mootummaan paarlaaamaan sun ijaareefi kaabinoonni filataman waggaa shaniif ta’uus dubbatan.
Kana waan ta’eefis, sirna baniinsa waloo Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataafi Mana Maree Federeeshinii bara paarlaamaa 5ffaa kan waggaa 6ffaa irratti bakka bu’oonni naannoo Tigiraay akka hin hirmaanne Obbo Getaachoon mirkaneessaniiru.
‘’Akka amantaa keenyaatti yeroon hojii miseensota paarlaamaa waggaa shaniif ummataan filatamanii kaleessa halkan walakkaa xumurameera.
Walgahiin har’a waamame jedhame akkuma nama kaanii callisteema kan wal waaman yoo tahe malee aangoo seera qabeessaa hin qabu.”
Obbo Geetaachoon Tigiraay bakka bu’ootashee ni ergitimoo ni dhiisti isa jedhuuf, ‘’Tigiraay bakka bu’ootashee hin ergitu. Isaan qofa osoo hin taane muudama kamiyyuu TPLF bakka bu’an hundi akka bahan taasifameera,’’ jedhan.
Hariiroon mootummaa Federaalaa waliin qabdan akkam taha?
”Ministira Muummee, Itti-aanaa isaanii, kaabinoota isaanii, paarlaamaas tahe manni maree federeshinii yeroon aangoo isaanii seera qabeessa tahe [halkan Dilbataa] xumurame waan taheef hariiroo homaa ni qabaanna jenne hin yaadnu,’’ jedhan Obbo Getaachoo Raddaa.
Biyyaafi mootummaa adda baasuu qabna kan jedhan Obbo Geetaachoon, ‘’Diigameera kan jennu kaabinee Ministira Muummeen gaggeeffamudha, mana mare federesshinii naannoleen bakka buufamedha, waggaa shaniif kan filatame paarlaamaadha diigameera kan jenne,’’ jedhan.
Kanaan ala qaamolee haqaa waliin hariiroon keenya itti fufa jedhan.
Akka Tigiraayitti sadarkaa mana murtii Federaalaatti kan ilaalamu jiraannaan itti fufuu danda’a jedhan Obbo Geetaachoon.
Tajaajila hawwaasummaa kennuu, qonnaafi dhaabbileen kaan hojii isaanii itti fufu kan jedhan Obbo Geetaachoon, ‘’Raayyaan ittisa biyyaa hojii milishaa guyyaan bobba’ee hojjetutu hafa jenne malee nageenya biyyaa eegsisuudhaan hojii isaanii itti fufu jechuudha jedhan.
”Dhaabbilee kaan waliin hojii itti fufna…”
Poolisiin yakka qorachuu, hordofuun kan itti fufan taha jedhanii, dippilomatotnis biyya bakka bu’an waan tahaniif isaanis hojii isaanii ittti fufu jedhan.
Dhaabbilee gibira sassaabaniifi gumurukaa waliinis akka hojii itti fufan ibsaniiru.
Hanga mootummaan seera qabeessa tahe hundaa’utti qaamolee diigaman jennu kanneen waliin hariiroo hin qabaannu jedhan Obbo Geetaachoon.
Itoophiyaan filannoo biyaalessaa yoom akka gaggeesitu addatti ibsuu baattus Ministerri Fayyaa of eeggannoon filannichi gaggeeffamuu akka danda’u ibsee ture.
Filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa bara darbe gaggeeffamuuf ture sababa weerara koronaavaayirasiitiif jecha waan hin gaggeeffamiin hafeef, bakka bu’oonni naannolee manni maree lamaan keessa jiran hanga filannoon gaggeeffamutti akika turan murtaa’ee ture.
Kana hordofuun ammoo naannoon Tigiraay komishinii filannoo qofaatti hundeeffachuun filannoo gaggeeffachuu murteessuun Fulbaana 9, 2020 gaggeeffatee ture.
Mootummaa Federaaala ammoo, keessattuu mana maree Federeshinii filannoon naannoon Tigiraay qofaatti gaggeeffate seeraan ala akka ta’eefi kan fudhatama hin qabne jedheera.
Kolonel Gammachuu Ayyaanaa fi isa waliin jiran akka gadi lakkifaman Manni Murtii ajajeera! Duris yakkama…